Alahadin’ny SEFALA 2018. – FJKM
SEKOLY FANOMANANA LAIKA FOIBE (SE.FA.LA.)
« Ataovy mpianatra ny firenena rehetra.» (Mat.28:19)
ALAHADY 30 Desambra 2018
Trano Ifanomezantsoa I -Tohatohabato RANAVALONA I
– Antaninarenina – Antananarivo Rihana faha 6 – Varavarana faha 607
Lohahevitra volana Desambra 2018:
“Mifalia amin’ny fitiavan’ny Tompo”
FANDAHARANA : Litorjia Endriny faharoa
Fidirana : Feon-java-maneno
Fiarahabana Apostolika : Rom.1: 7
Fiderana an’Andriamanitra: Sal. 95. 1- 6
Hira: 75/ 1,2
Vavaka Fiderana sy Fankalazana ny Tenin’Andriamanitra:
Soratra Masina: I Sam. 2. 1 – 3 / Lio. 1. 39 – 56 / Fil. 4. 1 – 9
Hira : 324/ 1-2 (Fih.Fif.)
Asan’Andriamanitra: Famakiana ny HAFATRA SEFALA Foibe
Rakitra: 539 – 545 – Antokompihira
Fanolorana ny rakitra: Hira Fanampiny: 53/ 2 faranana amin’ny Amena
Hira: 68. 1
Tso-drano: Hira: 68. 2
Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny famindrampo ary ny fiadanana avy amin’Andriamanitra Ray sy Kristy Jesoa Tompontsika.
Ny Biraon’ny SeFaLa Foibe noho ny sitrapon’Andriamanitra, mba ho mpitory ny teny fikasana milaza fiainana izay ao amin’i Kristy Jesoa, mamangy anareo Mpitandrina, Katekista, Mpiandry, Mpitoriteny, ary isika Kristiana isam-pitandremana.
Fotoana iray sarobidy izao Alahadin’ny Fiantsoana sy Alahadin’ny SeFaLa izao satria fotoana hitrotroana amam-bavaka manokana antsika navoakan’ny SeFaLa sy ireo eo andalam-pianarana ary indrindra ny Tale sy ny Komity Mpandrindra ary ny Mpampianatra SeFaLa rehetra eo ihany koa ny SeFaLa Foibe. Misaotra ny Tompo isika fa raha araka isa dia mitombo ireo manolontena.
Koa entanina isika hiezaka mafy amin’ny fandraisana anjara ho fanatanterahana ny vinan’ny FJKM hoe : « Vontosy Filazantsara ny Nosy Madagasikara » manoloana izany hafanana izany. Torio ny Tenin’Andriamanitra, mijoroa Vavolombelona, aoreno ny Fiangonana.
Farany aza adino ny manohana hatrany ny asantsika aty amin’ny SeFaLa Foibe, indrindra ny mifampivavaka. Mampahery antsika rehetra mba hazoto sy hafana fo amin’ny fanompoana sy ny fanoloran-tena. « Tano mafy izay anananao, mba tsy hisy haka ny satroboninahitrao » (Apo. 3 : 11)
Ny Filoha : RAKOTONDRAMANANA Arijaona, Mpitandrina
Ny Mpitantsoratra : Lalaina Johary, ROBSON RADO Mpitandrina